दिन काट्ने काल पर्खनेहरु नेता हुन् सक्दैनन्- प्रचण्ड - Everest Dainik - News from Nepal
दिन काट्ने काल पर्खनेहरु नेता हुन् सक्दैनन्- प्रचण्ड
दमक, मंसिर २, । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिन काट्ने काल पर्खनेहरु नेता हुन नसक्ने बताएको छ।
शनिबार झापाको दमकमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै प्रचण्डले भने– ‘नेता हुन सरदरबाट माथि उठ्नुपर्छ । घिसेपिटे तरिकाले राजनीति धान्नेहरु नेता हुन सक्दैनन्। कमरेड केपी ओली र मैले त्यो घिसेपिटे तरिका भत्काई दियौं । निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेका छौं, नयाँ तरङ्गसहित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्द गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी नयाँ आवेगसहित आएका छौं। दिन काट्ने काल पर्खनेहरु नेता हुन सक्दैनन्।’
‘नेताहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले ईतिहासमा निकै महत्व राख्दछ। नेताहरुले सही ढङ्गले सोच्दा ईतिहास २०–३० वर्ष अघि जान सक्छ, नेताहरुले गलत सोच्दा राजनीति र ईतिहास कैयौं वर्ष पछि धकेलिन्छ’ प्रचण्डले भने, कमरेड केपी ओली र मैले जोखिम उठाएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्द गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्ने संकल्प गरेका छौं ।
कमरेड केपीले निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्षको जोखिम उठाउनुभयो, वर्षौं जेल बसे । मैले जनयुद्धको जोखिम उठाएँ, नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो। शान्ति प्रक्रियाको जोखिम उठाएँ। नेपालमा ठूलठूला परिवर्तन भए। आज फेरि देशको विकास र समृद्धिका लागि हामीले सकारात्मक रुपले सोच्यौं र एकता सम्भव भयो।’
‘नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरु, तपाईहरुले २५–३० वर्ष नेपालमा शासन गरे । देशका लागि के गरे ? विकास र समृद्धिको योजना कहाँ पुग्यो ? अब देशको जिम्मा कम्युनिष्टहरुले लिन्छन् । तपाईहरुले हेर्नुस् प्रचण्डले भने, ‘के नेपाल कांग्रेसको बपौति हो ? कांग्रेसले जित्दा लोकतन्त्र बलियो हुने हामीले जित्दा अधिनायकवाद हुने ? हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमै छौं । हामीले बनाएको संविधानकै दायराभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईहरुलाई टाउको दुखाई किन ?’
‘चुनाव रोक्न अनेक षडयन्त्र भए, सकेनन् । अहिले पनि षडयन्त्र भइरहेको छ। तर, अब इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि चुनाव रोकिन्न’ प्रचण्डले भने । शनिबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले बिर्तामोडमा आयोजित स्वास्थ्य महोत्सवको उद्घाटनमा सहभागी भए ।
त्यसैगरि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिए ।